Chautari Daily » ५ सय चोरेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? जान्नुहोस्
काठमाडौं । पत्रकार ऋषि धमला प्रश्न गर्ने शैली र हाउभाउले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाक्काहाक्की प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बनाउनेमा उनको ध्यान हुन्छ।
रिपोटर्स क्लब नेपालका सभापति, प्राइम टिभीका अध्यक्ष, नेपाली रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष र रिपोटर्स नेपाल डटकमका सञ्चालक तथा प्रधानसम्पादकका रुपमा क्रियाशील धमला ‘धमलाको हमला’ र ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ नामक टक शो बाट नेपाली दर्शक स्रोतामाझ प्रस्तुत भइरहेका छन्।
घरबाट बुवाको ५०० चोरेर काठमाण्डौ छिरेका धमलासँग कसरी यति धेरै सम्पति भन्ने कुराको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक नै हो। थुप्रै सञ्चारगृहको मालिकका रुपमा रहेका धमला सम्पत्ति मेहनतले नै कमाएको दाबि गर्छन्।
कति छ ऋषि धमलाको सम्पत्ति ?
तीन दशक बढीको पत्रकारिता अनुभव संगालिसकेका धमला अझै पनि क्रियाशील रिपोर्टर हुन्। धादिङ्ग जिल्लामा जन्मेका ऋषि सानैबाट चलाख थिए।
जे कुरा पनि जोसका साथ गरि हाल्ने धमलाले आफ्नो माध्यमिक पढाइ उनको गृह जिल्लामा नै सकेका थिए। गाउँको पढाइ सकेपछि काठमाण्डौ छिरेका उनले काम गर्दै अध्ययन गरे। पछि उनले आफ्नाे पढाइ बिचमा छोड्नु परेको थियो। विहान पाँच बजेदेखि राति १२ बजेसम्म काम गर्ने धमलासँग अहिले भने एउटा किआ सेल्टोस कार रहेको छ।
जसको मूल्य ५२ लाख रहेको छ। उनले तलब भने महिनाको ८० देखि १ लाखसम्म रहेको बताइएको छ। त्यस्तै उनको जम्मा सम्पत्ति भने १५ करोड जति रहेको बताइएको छ।
यो कुरा उनले नोभेम्बर ७ , २०२० को ग्ल्यामरगफको एपिसोडमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रकाश सुबेदीले घरबाट बुवाको ५०० चोरेर काठमाण्डौ छिरेको धमलासँग कसरी यत्रो सम्पति र पहुँचबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर ऋषि धमलाले त्यसको उतर मेहनत गर्ने जो कोहिले पनि सम्पत्ति कमाउन सक्छ भन्दै जवाफ दिएका थिए।
प्रकाशित मिति ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०६:३७
नायिका श्वेता खड्कालाई कोरोना संक्रमण, कस्तो छ अवस्था ?
आँचल शर्मा भन्छिन्- ‘सलमान भन्दा नि उदीपजी ह्याण्डसम’ !
दुखद् खबर : पढ्नको लागि देश पुगेकी नेपाली चेलीको…..
गायिका समीक्षा अधिकारीको यस्तो कडा चेतावनी कसलाई ? हेर्नुहोस्
भिडियो भाइरल भएपछि ३ जना एकसाथ मिडियामा ( भिडियो हेर्नुहोस् )
बिहे नगरि बच्चा जन्माउन चाहान्छु नायिका नम्रता सापकोटा ( भिडियो हेर्नुहोस्)
छोरी ‘गर्भवती’ हुने डरले ३ महिने सुई लाइदिने गरेकी छु’ : आमा
सामाजिक सञ्जालमा रातारात भाइरल बनेकी यि युवती को हुन् ? जान्नुहोस्
विबादमा तानिन थालेपछि नायिका पूजा शर्माले गरिन् यस्तो निर्णय
यी हुन् बलिउडकी सर्वाधिक धनी नायिका, सम्पति सुन्नुभयो भने उड्ने छ तपाइको होस्
शिक्षकको प्रेममा परेपछि फकाउँदै…..
महिलाका लागि आकर्षक जागिर
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यी महिला को हुन् ? जान्नुहोस्
पल शाहसँग बिबाह गर्न चाहन्छु : उषा
चाइनिज केटा र नेपाली केटिको दोस्रो बिबाह धुमधाम सम्पन्न (भिडियो हेर्नुहोस्)
डिभोर्सपछि एक्लै रमाइरहेकी मिलन…
हनिमुन मनाउन जाने जोडीलाई…….